ဂူအတွင်း ပိတ်မိနေသည့် ကလေးများကို တွေ့ရှိသည့်အထိ ရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းတော်ဝင်ေ? - Yangon Media Group
ဂူအတွင်း ပိတ်မိနေသည့် ကလေးများကို တွေ့ရှိသည့်အထိ ရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းတော်ဝင်ေ?
မယ်ဆိုင်၊ ဇူလိုင် ၁
ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ ထမ့်လုံနမ့်ဂူအတွင်း ပျောက်ဆုံးနေသော ထိုင်းကလေးငယ် ၁၂ ဦးနှင့်နည်းပြတစ်ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ရေးအတွက် ကိုးရက် မြောက်နေ့အဖြစ် ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် ဆက်လက်ရှာဖွေနေပြီးဂူအ တွင်းပိတ်မိနေသည့် ကလေးများကိုတွေ့ရှိသည်အထိ ရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းတော်ဝင်ရေ တပ်အထူးအဖွဲ့၏ ရှာဖွေရေးခေါင်း ဆောင် Arpakorn Yookongkaew ကပြောကြားလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ကယ်ဆယ်ရှာဖွေရေးလုပ် ဆောင်နေသည့် ထိုင်းတော်ဝင် ရေတပ်၏ အထူးအဖွဲ့ဝင်များသည် ကလေးများရှိနေနိုင်သည့်နေရာများကို ရေငုပ်ရှာဖွေရှေ့တိုးရင်း ထိန်းချုပ်ညွှန်ကြားပေးနေသည့် နေရာနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန် ရေ အောက်တွင် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းကို သွယ်တန်းနေကြသည်။ ”ရေတပ်အထူးအဖွဲ့ကို ဂူအတွင်း အမှတ်(၃) ကနေ ရေကြီးနေလို့သွားဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ အတွင်းဘက်ပိုင်းကို ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဆက်ဝင်ဖို့ အမိန့်ပေးထားတယ်။ သူတို့ဟာ မှောင်နဲ့မည်းမည်းထဲမှာ ပစ္စည်းကိရိယာတနင့်တပိုးနဲ့ ရေ ငုပ်ရှာဖွေနေရတာပါ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ သူတို့အနေနဲ့ ရှာဖွေရေးကို မတွေ့မချင်းမရပ်ပါဘူး”ဟု ထိုင်းတော်ဝင်ရေတပ် အထူးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် Arpakorn Yookongkaew က မီဒီယာများကိုပြော ကြားသည်။
ပျောက်ဆုံးကလေးငယ်များ ရှာဖွေရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအပါအ ဝင် သြစတြေးလျရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်တပ် မတော်၊ အမေရိကန်တပ်မတော်၊ ဗြိတိန်မှ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ဂျပန် မှပညာရှင်များ၊ တရုတ်မှဂူအတွင်း ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူခြောက်ဦး ပါအဖွဲ့တို့က ကူညီမှုများလုပ်ဆောင် ပေးနေပြီး ဇူလိုင် ၁ ရက်ညနေတွင် ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် အရေးပေါ်လူ နာသယ်ဆောင်ခြင်းများကို အကြို ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ကြသည်။ မြန်မာဘက်မှ ကယ်ဆယ်ရှာ ဖွေရေးအနေဖြင့် တာချီလိတ်မြို့ပုန်း ထွန်ရပ်ကွက်အတွင်း၌ ငွေစေတီ ကုန်းရှိဂူ၊ သီရိရတနာဂူ၊ ငွေဦး ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းတိုက်ရှေ့ရှိ ဂူများသို့ရှာဖွေမှုများကို သုံးရက်ဆက်တိုက်ရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဆိုပါဂူများမှာ ယခင်က မယ်ဆိုင်ဘက်ရှိ ဂူများနှင့်ပေါက်သည်ဟု သိရသော်လည်းသွား ရောက်ရှာဖွေကြည့်ရာတွင် ဂူများမှာအပိတ်များဖြစ်နေလျက်ရှိကြောင်းနှင့်လတ်တလောတွင် မယ်ဆိုင် ချောင်းနှင့်အနီးစပ်မှာ ပုန်းထွန်ရပ် ကွက်တွင်းအနေဖြင့် အဆိုပါဂူများသာရှိကြောင်း တာချီလိတ်ခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးဌာနမှူးဦး ကျော်ကိုကိုကပြောကြားသည်။
ကယ်ဆယ်ရှာဖွေရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ပူးပေါင်းကူညီနေသည့် တရုတ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့၏ ရေ အောက်သုံးဒရုန်းနှင့် 3D ပုံရိပ် ဖော်စက်များသည် ဂူအတွင်းရွှံ့ရေများကြောင့် နည်းပညာတချို့က အသုံးပြုမရဖြစ်နေသည့်အတွက် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်လက်ကူညီသွားမည်ဖြစ်သည်။ ”ကျွန်တော်တို့မှာဂူအတွင်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိပြီးသားပါ။ ကျွန် တော်တို့အနေနဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းထဲအသုံးပြုတဲ့ နည်းပညာလည်း ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ ကလေး တွေအတွက် တစ်ခုခုတော့လုပ် ပေးနိုင်မှာပါ”ဟု ထမ့်လုံနမ့်ဂူရှာဖွေ ရေး၌ ပူးပေါင်းကူညီနေသည့် တရုတ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင် Green Boat Emergency Organization က ဂျိမ်းစ်ဝမ်က ပြောကြားသည်။ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ များသည် ဂူအတွင်းမှ ရေတပ်သားများအပြင် နိုင်ငံခြားသားအဖွဲ့ များသည် တောစပ်တောင်ပေါ်များအထိ တက်ရောက်ရှာဖွေနေကြပြီး ဂူအပြင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအ တွင်းတွင် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက လိုအပ်သည်များကို ဆောင်ရွက်ပေးနေကြသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးသမားများအတွက် အောက်ဆီဂျင်သည်အ ရေးကြီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ရှေ့ ဆက်တိုးသည့်အကွာအဝေးနှင့် အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်အောင် အောက်စီဂျင်ဘူးများသယ်ဆောင် နေကြပြီး ၎င်းတို့လာသည့်လမ်း တစ်လျှောက်ဂူအတွင်းပိုင်း ၂၅ မီတာအကွာတိုင်းတွင် အောက်စီဂျင်ဘူးများကို အမှတ်အသားဖြင့်ထား ပေးထားသည်။ ထို့အပြင်ပိတ်မိနေသည့် ကလေး ၁၃ ဦးအတွက် အောက်ဆီဂျင်ဘူးများ၊ အစာအာဟာရများကိုလည်း သယ်ဆောင်သွားရပြီး ရေငုပ်ဝတ်စုံအကူအညီ ဖြင့် ခေါ်ထုတ်ရန်နှင့်ကလေးငယ်တို့ကို ညွှန်ကြားပြသပေးဖို့လည်း ပြင်ဆင်ထားကြသည်။ ရေတပ်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များသည် ရေငုပ်သွားနေရသည့် နေရာများရှိသည့်အတွက် ကလေးများ ရှာဖွေတွေ့ရှိလာပါက ပြန်လည် ကယ်ထုတ်လာမည့်လမ်းကြောင်းတွင် ရေများလျော့နိုင်သလောက် လျော့ကျသွားရန် ရေစုပ်အား ကောင်းသောရေစုပ်စက်ကြီးဖြင့် ရေများကိုစုပ်ထုတ်နေရကြောင်းသိရသည်။
ကိုဇောင်း (Tachileik (Tachileik News Agency)
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ရန်ကုန်အဝေးသင် တက??
အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး အကြီးအကဲကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ ထရမ့် စီစဉ်နေ